Chili Piper: famerenana amin'ny laoniny ny fandaharam-potoanan'ny ekipa mpivarotra anao, kalandrie ary boaty | Martech Zone
Piper Chili dia vahaolana fandaharam-potoana mandeha ho azy izay mamela anao hahafeno fepetra avy hatrany, amin'ny làlan-kaleha, ary amin'ny fivarotana fivarotana miaraka amin'ny fidirana anaty dia mitarika ny fotoana hiovany amin'ny tranokalanao.
Ny fomba hanampian'ny sakay Piper ny ekipa mpivarotra
Tsy misy intsony ny takelaka fanaparitahana firaka mampiahiahy, tsy misy mailaka sy mailaka mandroso sy miverina fotsiny hamandrihana fivoriana, ary tsy misy fotoana very intsony noho ny fanarahan-dia miadana.
Anisan'izany ny mampiavaka ny sakay
Chili Piper dia manome ny tanjonao fandaharam-potoana amin'ny traikefa tsara kokoa ho an'ny tsirairay izay mivadika fitarihana bebe kokoa ho fivoriana mahafeno fepetra.
Mifandraisa avy hatrany amin'ny fitarihana fidirana - Concierge dia mamela ny vinavinanao handamina fivoriana na hanomboka antso mivantana eo noho eo aorian'ny fandefasana forme web. Mialà veloma amin'ireo fotoana mety hividianana varotra. Ataovy avo roa heny ny hafainganam-pandehanao hitarika amin'ny alàlan'ny fampifandraisana reps amin'ny mpividy mahay raha vao manoratra amin'ny tranokalanao izy ireo.
Fivoriana boky na aiza na aiza toerana iasanao - Miaraka amin'ny Booker Instant, ny reponao dia afaka mamandrika fivoriana sy mandefa antso anaty segondra nefa tsy mila manova efijery.
Famandrihana tsindry iray amin'ny alàlan'ny mailaka - Ahenao haingana ny tsindry sy fandaharam-potoana fivoriana. Ampidiro ao amin'ny mailakao ny fahafahanao ary avelao ny hamandrika ireo prospect amin'ny tsindry tokana.
Antsoy sy horonan-tsary amin'ny fotoana tena izy - Tsy misy famantarana tsara kokoa mitarika firy noho ny olona vonona hiresaka izao. Omeo safidy ireo prospect hanombohana antso an-tariby na an-tsary mivantana eo amin'ny tranokalanao.
Tsinjarao ny fivoriana ho an'ny rep marina raha ny tena izy - Miaraka amin'ny Routing marani-tsaina, voalahatra ho azy ny fivoriana miaraka amin'ny mpikambana marina ao amin'ny ekipan'ny varotrao, ahafahanao mizara fitarihana ara-drariny ary manafoana ny takelaka.
Mahaiza, lalana ary boky amin'ny tsindry tokana - Ny fitarihana fitarihana mandeha ho azy dia manome antoka fa ny vinavinam-pahaizana mendrika dia voalahatra miaraka amin'ny rep marina amin'ny tena izy. Ampiasao ny fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny pejin-tranonkalanao hahafeno fepetra ny fitarika miditra amin'ny fotoana tena izy ary hitodihana any amin'ny mpivarotra marina.
Famindrana robina boribory - Ataovy azo antoka ny fizarana fitarihana fitarihana amin'ny alàlan'ny bisikileta mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny vondrona mpivarotra isaky ny misy fivoriana vaovao napetraka.
Raketo an-tsoratra ny fifandraisana rehetra ao amin'ny Salesforce - Ny Chili Piper dia mampiditra ny hetsika ao amin'ny Salesforce. Ny naoty, ny fandaharam-potoana ary ny antsipiriany momba ny fivoriana dia nasiana tombo-kase ary voarakitra an-tsoratra mba hanampiana anao hitantana tsara kokoa ny fantsom-pitateranao.
Mandrefy sy manatsara ny tahan'ny fiovam-pivoriana - Araho ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny fivoriana, ao anatin'izany ny famandrihana, fivoriana natao, tsy fampisehoana, fandaharam-potoana ary fanafoanana. Manamboara tatitra ao amin'ny Salesforce hahalala bebe kokoa sy hanatsara ny fiovam-pizahanao miditra.
Piper Chili mifangaro amin'ny rindrambaiko fitadiavanao varotra sy fivarotana tianao indrindra - ao anatin'izany ny Salesforce Pardot, Hubspot, Marketo, Salesforce, Eloqua, Twilio, Zapier, Intercom, GoToMeeting, ary Zoom.
Midira maimaim-poana amin'ny Chili Piper
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Piper Chili.
Tags: piper sakayeloquahubspottelefaoninamarketokalandrie varotrarecorder an'ny varotra varotrafandraketana antso ho an'ny varotrafandaharam-potoana fivarotana fivarotanafivarotana fivarotanafivezivezena amin'ny varotrachat video varotrasalesforcempivarotra pardotTwiliozapierZoom